Qaaraa (Qacaa) diimaa soorachuun carraa du’uu %13 hir’isa jedhu qorattoonni - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Qaaraa (Qacaa) diimaa soorachuun carraa du’uu %13 hir’isa jedhu qorattoonni
Qaaraa (Qacaa) diimaa soorachuun carraa du’uu %13 hir’isa jedhu qorattoonni
Warri qaaraa diimaa jaalattan itti cimsaa; kan sodaattan xiqqo-xiqqoon nyaata keessa buusaa. :)
Qaaraa ykn qacaa diimaa nyaachuun carraa du’uu dhibbeentaa 13 akka hir’isu qorannoon ifa godhe. Akka qorattoota Yunivarsiitii Vermont (Larner College of Medicine) biyya Ameerikatti aragamutti qaaraan ykn qacaan carraa du’aa %13 kan gadi hir’isu dhibee onnee fi cufamiinsa ujummoo dhiigaa hir’isuudhaan.
Qorannoon kuni kan geggeeffame namoota 16,000 irratti. Namoota kanniin irratti woggaa 23 hordoffiin godhamaati kan ture.
Qaaraan ykn qacaan diimaan raajii kana akkamitti akka hojjatu ammatti ifaa miti. Garuu fayyaa namaaf (umrii dheerinaaf) gumaacha guddaa kan godhaa jiru capsaicin waan jedhamu (qaaraa diimaa keessatti argama) taúu hin oolu shakkii jedhu qabu, qorattononni. Capsaicin amala ujummoo dhiigaa qulqulleessuu fi furdina hirísuus qaba.
Qacaa nyaachuu fi umrii dheerinni walitti hidhata qabaachuu isaanii kan agarsiise yeroo jalqabaaf qorannoo bara 2015 biyya Chaayinaatti geggeeffameedha.
Qorannoon dabalataa walitti hidhata umrii dheerinaa fi qacaa diimaa nyaachuu mirkaneesse taaneen gara funduratti qaaraa diimaan akka dawaaatti ykn akka soorata dabalataatti fudhatamuun isaa waan hin oolle ta’uu dubbatu qorattoonni.
Warri qacaa diimaa jaalattan itti jabeessaa; kan sodaattan ammoo xiqqo-xiqqoos taatu nyaata keessa buusaa 🙂
qaaraa diimaa nyaachuu
Previous articleItoophiyaan qabeenya konkolaataan addunyaa irratti sadarkaa 186ffaa irratti argamti
Next articleHariiroon Itoophiyaa fi Suudaan Kibbaa hammaataa dhufuun qabsoo hidhannoof foddaa saaqa